Otú Ị Ga-esi Na-ezere Ọnwụnwa |Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Nepali Norwegian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Nwa okorobịa dị afọ iri na isii aha ya bụ Chinedu * sịrị: “Oge ụfọdụ, ụmụ agbọghọ chọrọ ka mụ na ha kpawa na-ana m nọmba ekwentị m. Ha gwa m ya, mụ aghara ha pụwa. Ma, m na-adị ajụ onwe m ma è nwere ihe o mere ma m nye ha ya? N’eziokwu, ụmụ agbọghọ ndị ahụ bụcha asampete.”
Ọnwụnwa ọ̀ na-abịara gị otú a o si abịara Chinedu? Ọ bụrụ na ọ na-abịara gị, i nwere ike izere ya.
Ọ bụrụ na i kwere ka ọnwụnwa merie gị, ị ga-akpatara onwe gị nsogbu
E nweghị onye ọnwụnwa na-anaghị abịara. Ọnwụnwa na-abịa n’ụdị dị iche iche, na-abịakwara ma nwata ma okenye. Pọl onyeozi abụghịzi nwata mgbe o dere, sị: “N’ezie, iwu Chineke na-eme m obi ụtọ, . . ma ana m ahụ n’ahụ́ m iwu ọzọ nke na-alụso iwu nke uche m agha, na-adọrọkwa m n’agha gaa n’iwu nke mmehie.” (Ndị Rom 7:22, 23) N’agbanyeghị mgba a Pọl na mmehie nọ na-agba, o meriri mmehie. Gịnwa ga-emerilikwa ya. Anyị ekwesịghị ikwe ka anụ ahụ́ anyị na-achị anyị. (1 Ndị Kọrịnt 9:27) Ọ bụrụ na ị mụta otú ị ga-esi na-emeri ọnwụnwa ugbu a ị ka bụ nwata, ọ ga-enyere gị aka izere ọtụtụ nsogbu nwere ike ịbịara gị, nyekwara gị aka mgbe ị ghọrọ okenye.
Ihe ndị e ji agbasa ozi so akpata ọnwụnwa. Baịbụl kwuru na ọnwụnwa na-abịara ndị na-eto eto. Ọnwụnwa ndị ahụ na-esikwa ezigbo ike. (2 Timoti 2:22) Kama inyere ha aka, fim, egwú, tiivi, na akwụkwọ ndị na-eto eto na-agụ na-eme ka o sikwuoro ha ike izere ọnwụnwa. Ihe ndị a na-akụziri ha na ime ihe na-adịghị mma enweghị ihe o mere. Dị ka ihe atụ, na fim ọ bụla a na-egosi nwoke na nwaanyị hụrụ ibe ha n’anya, ha ga-enwerịrị mmekọahụ tupu fim ahụ agwụ. Ma, Baịbụl kwuru na onye ọ bụla n’ime anyị ‘ga-ezereli ọchịchọ anụ ahụ́.’ (1 Pita 2:11) Ọ pụtara na i nwere ike ikpebi na ị ga na-emeri ọnwụnwa. Olee otú ị ga-esi na-emeri ya?
Mara ihe bụ́ nsogbu gị. Ị manụ na ọ bụ ihe ọ bụla na-amasị mmadụ ka e ji anwa ya ọnwụnwa. N’ihi ya, gbaa mbọ mara ihe bụ́ nsogbu gị ka i nwee ike ịma otú ị ga-esi kee nkwụcha maka mgbe a ga-eji ya nwaa gị ọnwụnwa?—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Jems 1:14.
Jikere maka ọnwụnwa. Nọrọ ala chee echiche ka ị mara ụdị ọnwụnwa nwere ike ịbịara gị. Kwadebe ihe ị ga-eme ma ọ bụ otú ị ga-esi zere ya ma ọ bịa.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 22:3.
Mara ihe dị njọ na ihe dị mma. Baịbụl kwuru na mgbe a nwara Josef ka ọ kwaa iko, o kwuru, sị: “Olee otú m ga-esi mee oké ihe ọjọọ a wee mehie Chineke?” (Jenesis 39:9) Ihe ahụ Josef kwuru gosiri na ọ ma ihe dị mma na ihe dị njọ. Gịnwa, ị̀ ma ihe dị mma na ihe dị njọ?
Gị na ndị ga-enyere gị aka izere ọnwụnwa na-akpa. Ọ bụrụ na ndị enyi gị bụ ndị hụrụ ihe dị mma n’anya, ha ga-enyere gị aka ịna-ezere ọnwụnwa. Cheta na Baịbụl sịrị: “Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije ga-ama ihe.”—Ilu 13:20.
Zere ihe ndị nwere ike ime ka izere ọnwụnwa siere gị ike. Dị ka ihe atụ:
Gị na onye na-abụghị nwoke ibe gị ma ọ bụ nwaanyị ibe gị anọla n’ebe ndị mmadụ agaghị na-ahụ unu.
Agala n’Ịntanet n’oge ma ọ bụ n’ebe ọ ga-adịrị gị mfe ile ndị gba ọtọ.
Zere ndị na-ekwu okwu rere ure na ndị na-akpa àgwà ọjọọ.
Olee ihe i chere ị ga na-eme nke ga-enyere gị aka ịna-ezere ọnwụnwa?—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: 2 Timoti 2:22.
Rịọ Jehova ka o nyere gị aka. Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: ‘Na-ekpenụ ekpere mgbe niile, ka unu wee ghara ịbanye n’ọnwụnwa.’ (Matiu 26:41) Nke bụ́ eziokwu bụ na Jehova Chineke chọrọ ka ị na-emeri ọnwụnwa, ọ ga-enyekwara gị aka. Baịbụl kwuru, sị: ‘Ọ gaghịkwa ekwe ka a nwaa gị gabiga ihe ị pụrụ idi, kama mgbe ọnwụnwa bịara, ọ ga-emere gị ụzọ mgbapụ, ka i wee nwee ike idi ya.”—1 Ndị Kọrịnt 10:13.
^ para. 4 Aha a kpọrọ ya abụghị ezigbo aha ya.
“A na-anwa onye ọ bụla mgbe ọchịchọ nke aka ya rapụtara ya wee rafuo ya.”—Jems 1:14.
“Onye maara ihe bụ onye hụrụ ọdachi gaa zoo.”—Ilu 22:3.
“Gbaara ọchịchọ a na-enwe n’oge ntorobịa ọsọ.”—2 Timoti 2:22.
“Ọnwụnwa bịara m, m na-ajụ ya ozugbo. Anaghị m achọ ichewe ma è nwere uru m ga-erite ma m mee ihe ahụ. Ihe na-etinyekarị mmadụ ná nsogbu bụ ma onye ahụ chewe na e nwekwaranụ ike ya abụrụ na ihe ahụ abụchaghị ihe ọjọọ.”
“Adịla na-anọ n’ebe ị ma na ọnwụnwa ga-abịara gị ọsọ ọsọ. Gị na ndị ga-agba gị ume ka ị na-eme ihe dị mma na-akpachi anya. Ọ bụrụ na ị na-ezere ụmụ irighiri ọnwụnwa ugbu a, ọ ga-enyere gị aka izere ndị nke siri ike ga-abịara gị mgbe i toro.”
Mata ihe ndị nwere ike inyere gị aka ka ị ghara ime ihe ọjọọ.